Natiijada baaritaanka suuqa tagaasida oo dowladda maanta loo gacan geliyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Amy Rader Olsson leder taxiutredningen. sawir: Lars Pehrson/TT, Maria Ridderstedt/Sveriges Radio.
Natiijada baaritaanka suuqa tagaasida oo dowladda maanta loo gacan geliyey
"Tagaasiida suuqa madow baa dhibaato nagu haya"
La daabacay onsdag 30 november 2016 kl 12.21
Baaritaan manta dowladda loo gacan-geliyey ayaa ku talinaya in dhaamaan baabuurta tagaasida ah ay wataan qiimo cabiraha la yiraahdo taxameter.
Sannadyadan dembe ayaa waxaa soo baxayey warar ah in uu isku dhexyaac ka taagan suuqa tagaasiida. barritanka maanta natiijadiisa dowladda loo gacangeliyey ayey ujeedadiisa aheyd ka soo talo baxinta sidii lagu hagaajin lahaa suuqa tagaasiida.
Wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha Anna Johansson ayaa saakay loo gacan-geliyey baaritaanka suuqa tagaasida(taxiutredningen)
Talooyinka ku jira baaritaanka ayaa kala ah:
In dhamaan baabuurta tagaasiida ay wataan waxa la yiraahdo taxameter ama qiime cabiraha.
In la sii caddeeyo xeerka haga baabuur isla raaca. Iyadoo baaritaanka ku taliyey in dadka ay isla raaci karaan baabuur lacagna is sasiin karaan balse ruuxa gaariga leh ama wado uusan macaash arrintan ka saameyn karin.
Dhawaanahan waxaa jiray shirkaddo ka hirgeliyey magaalooyinka waaweyn adeegyo tqiimo jaban oo u dhigma taxi oo kale, iyadoo shirkaddaha ayaa ku doodeen in aysan adeegan aheyn mid taxi oo kale balse uu yahay uu yahay baabuur isla raac.
Sidaas daraadeed waxay arrintan dhaleysay suu’aalo badan oo qasab ka dhigtay dowladda in ay baare u saarto arrintan. Natiijada baarintanka oo saakay xukumadda loo gacan.geliyey.
Maanta labada qof ee is taqaana ee inta baabuur isla raacda lacag kala qaadata ma jirto sharci ama xeer haga, baaritaankana waxuu ku taliyey in sidaas loo daayo.
Balse baaritaanka qodobada ku jiraa waxay xaduud cad u kale dhigeen adeega taxi iyo baabuur isla raaca.
Baabuur isla raaca dadka is yaqaana ma ahan in xeer loo dejiyo.
Dadka aan is aqoonin ee baabuur isla raaca lacag isku celisa ma ahan taxi ahaan in loo arko.
Qof baabuurka iska leh ama wada in lacagta uu ka qaadanayo qof uu baabuurka ku wado ma ahan in ujeedadiisa ahaato ka macaash.